Tag Archive for "आलोचना" - प्रधानमन्त्री ज्यू ! 'जनताको ढाड भाँच्ने गरि चर्को कर असुलेर समृद्धि आउदैन'
काठमाडौं । देशहरु कसरी समृद्ध हुन्छन् र कसरी कंगाल हुन्छन् भन्ने विषयमा धेरै सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अर्थशास्त्री पाउल कोलियरको भनाइ अनुसार देश कंगाल हुनका लागि तीनवटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै कारण पर्याप्त हुन्छन्, जुन निम्न रहेका छन् । १. समुद्रसम्म पुग्ने आफ्नो बाटो नहुनु र खराब छिमेकी हुनु २. प्राकृतिक श्रोत र साधन हुनु तर प्रयोग गर्न नसक्नु ३. ... थप पढ्नुहोस्
कांग्रेस सभापति देउवाले गरे सरकारको आलोचना
चितवन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान लागू गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। सभापति देउवाले संविधान उत्कृष्ट भए पनि त्यसलाई लागू नगराउन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरे। शुक्रबार नेपाल प्रेस युनियन, चितवन शाखाको ८ औं जिल्ला अधिवेशनलाई चितवनमा उद्घाटन गर्दै देउवाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि हनन् गरिरहेको आरोप लगाए। सभापति देउवाले न... थप पढ्नुहोस्